Egwuregwu Google niile, gụnyere akụkọ ifo dinosaur | Nzukọ mkpanaka
Egwuregwu Google niile, gụnyere akụkọ ifo dinosaur
Cristian Garcia | 10/10/2021 17:13 | Emelitere ka 10/10/2021 17:15 | Google Chrome
Ị chere na enwere naanị dinosaur Google a ma ama? Ee e, igwe nchọta ejirila mmalite ihe nchọgharị ịntanetị anyị nwere na PC anyị nwere nhọrọ egwuregwu Google nke ọtụtụ mmadụ amaghị maka ya. Mana anyị na -eme, anyị ga -agwa gị gbasara egwuregwu ha ka ọ bụrụ na ike gwụ gị, ị nwere ike nwalee ha. You nwere ike ịchọta ha abụọ site na injin nchọta n'onwe ya yana site na Doodle ma ị nwere ike igwu egwu site na pc gị na site na ekwentị mkpanaaka gị.
Anyị ga -akọwara gị otu esi egwu egwuregwu google ndị a n'ụzọ dị mfe Anyị ga -agwakwa gị ihe onye ọ bụla n'ime ha gbasara ka ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ị nwere ike banye kpọọ ụfọdụ egwuregwu n'oge ọ bụla. Maka onye na -egwubeghị dinosaur Google na kọleji ma ọ bụ n'ebe ọrụ n'ihi na ike gwụchara ya! Ọ dị mma ugbu a ị ga -amata na enwere ọtụtụ ndị ọzọ gafere, dinosaur abụghị naanị ya. Maka nke ahụ, yana maka na anyị niile bụ ndị egwuregwu na ndị ọzọ n'oge nkụda mmụọ, anyị na -aga ebe ahụ na ndepụta egwuregwu nke Google na -enye n'efu.
1 Egwuregwu Google kpam kpam n'efu site na nchọta n'onwe ya
1.2 Tic-tac-mkpịsị ụkwụ
1.3 Nwoke Pac
1.5 Zerg gbara ọsọ
1.7 Tụfuo mkpụrụ ego
1.8 Cloudgwé ojii Google
Egwuregwu Google kpam kpam n'efu site na nchọta n'onwe ya
Dịka anyị kwuru, iji nwee ike ịchọta egwuregwu vidiyo ndị a, naanị ihe ị ga -eme bụ ịme ya ọchụchọ dị mfe na igwe nchọta nke Google. Ọ bụrụhaala na itinye aha egwuregwu vidiyo na n'azụ Google ọ ga -apụta ka edepụtara ya dị ka Google Play, nke ị na -ekwesịghị ịgbagha na ụlọ ahịa Google Play, ebe ọ ga -apụtakwa dị ka o si na ụlọ ọrụ n'onwe ya.
Wayzọ ọzọ igwu egwu ha bụ ide egwuregwu Google na igwe nchọta. Ibe weebụ Google nke gọọmentị ga -apụta ebe ị ga -ahụ na enwere nhọrọ ga -akpọga gị na ibe ọzọ. N'ime ya ị ga -ahụ doodles niile o nweela, ị ga -ahụkwa egwuregwu ya niile. Ya mere ị marala ụzọ dị iche iche iji nweta. Otu kpọmkwem na nke ọzọ dị omimi, ọ dabere na ngwa ngwa na ike ọgwụgwụ gị, ị nwere ike ịme otu ma ọ bụ nke ọzọ iji rute egwuregwu nke igwe nchọta na-enye.
Mmemme kachasị mma iji bulie egwuregwu na Windows
Enweghị ọtụtụ ihe ị ga -ekwu maka usoro ịchọta ha ebe ọ bụ otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị na -eji ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ pc ma ọ bụ laptọọpụ, ya mere, anyị ga -eji ndepụta egwuregwu efu ị ga -ahụ ebe nchọta ọchụchọ Google a ma ama.
Zerg gbara ọsọ
Cloudgwé ojii Google
Tụfuo mkpụrụ ego
Na mgbakwunye na ndị a, nke bụ ndị ofu ma ugbu a anyị ga -akọwa etu ha siri dị, o nwere ọpụrụiche ndị ọzọ site na doodle oge nke nwekwara ike ịdị na webụsaịtị ha nke anyị kwurula n'elu. Egwuregwu ndị a bụ ndị a:
Bọchị Ndị Nne 2020
T-Rex na-agba ọsọ
Ọkachamara Magic Cat
Ezigbo Ghoul Duel
Gnomes nke ubi
Ụgbọ mmiri na slalom 2012
Afọ iri ise Dọkịta Onye
Afọ 155 nke Pony Express
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndị mmepe nke igwe nchọta na -emekarị ihe pụrụ iche maka ụbọchị dị iche ma ọ bụ nke egosipụtara na kalenda. Mana ugbu a, anyị ga -akọwara gị ihe egwuregwu ọ bụla dị na otu aha egwuregwu Google gbasara. Ọtụtụ n'ime ha ị ga -amaworị ihe ha bụ maka na ha bụ egwuregwu kpochapụwo, ọbụna ụfọdụ akwụkwọ ozi. Ndị ọzọ nwere ike ọgaghị adị oke mma, ọ bụ ya mere, ka anyị soro ya.
Ị nwere ike banye na -achọ ịnọ Owu: na Google. Ọ bụ egwuregwu kaadị kpochapụwo nke ndụ gị niile ị nwekwara na kọmputa gị. Egwuregwu vidiyo nwere ọkwa abụọ maka gị, nke dị nfe na nke siri ike. N'ime ihe dị iche na solitaire Windows ma ọ bụrụ na ị na -eche ihe kpatara m ga -eji nke Google ọ bụghị nke pc m, bụ na ọ nweghị ụzọ mkpirisi iji tinye kaadị site na ịpị ha ugboro abụọ, ị ga -adọkpụrụ ha ebe ịchọrọ hapụ ha. Nwere ike igwu egwu Google solitaire site na ihe nchọgharị, yabụ ị nwere ike banye na ekwentị mkpanaka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Egwuregwu a ị ga -ahụ ka ọ na -achọ Tic tac toe: na igwe ọchụchọ. Ọ bụ kpochapụwo ọzọ nke ndụ. Ị gaghị enwe ọkwa ihe isi ike na nhọrọ mbụ ọ ga -enye gị bụ ma ị ga -eji Xs egwu egwu ma ọ bụ O. Mgbe ahụ ị ga -pịa pịa iti igwe. Dị ka nke gara aga, ị nwekwara ike igwu egwu na ekwentị mkpanaaka gị n'enweghị nsogbu.
Ọ dị ka anyị na -aga n'ihu na ochie site n'oge ọzọ. Ịkpọ Pac Man ị ga -eji okwu Pac Man: na Google. Ọ bụ egwuregwu vidiyo kpochapụwo nke kara akara oge, akara ngosi. Ị nwere ike iji bọọdụ gị gwuo egwu site na iji akụ elu, ala, aka nri na aka ekpe. Dị ka nke gara aga, ị nwekwara ike igwu egwu na ekwentị mkpanaaka gị n'enweghị nsogbu. N'okwu a, ị ga -amịpụ mkpịsị aka gị n'akụkụ ịchọrọ ịga.
Egwuregwu vidiyo ochie Nokia a ma ama dịkwa na Google. Ị nwere ike ịchọta ya site n'inyocha agwọ:. Egwuregwu vidiyo a gụnyere iri apụl na agwọ na -agbatịkwu ogologo ma enweghị ike izere ihe mgbochi na -ewe ndụ ruo mgbe ha gburu gị. Egwuregwu vidiyo na -eri ahụ. Dị ka nke gara aga, ị nwekwara ike igwu egwu na ekwentị mkpanaaka gị n'enweghị nsogbu. Ị ga -amịkwa mkpịsị aka gị.
Ị nwere ike ịhụ ya na -eji ọchụchọ Zerg Rush:. Egwuregwu vidiyo na -egosi na okirikiri dị iche iche nwere mkpụrụedemede O nke Google ga -aga n'ihu na ihe nchọgharị ma ị ga -pịa ha ka ha gbuo ha. Dị ka nke gara aga, ị nwekwara ike igwu egwu na ekwentị mkpanaaka gị n'enweghị nsogbu.
Ị banye n'ime ya, ị ga -achọ ya Atari Breakout:, mana oge a site na ngalaba onyonyo Google. Ị ga -agbaji ngọngọ n'ekweghị ka bọl gbapụ wee gbapụ. N'okwu a ị nwere ike igwu egwu naanị na PC.
Ịchọta ya ị ga -achọ chọta Flip a Coin. Ọ bụghị na ọ bụ egwuregwu dị ka nke a, mana ọ dị mma ka gị na enyi gị kpebie ihe. Naanị ị ga -atụgharị mkpụrụ ego wee bịa n'isi ma ọ bụ ọdụ.
Ịchọta ya ị ga -achọ nweta ngwa mkpanaka Google. Ozugbo ịbanye n'ime, ị ga -etinyerịrị ọnọdụ ụgbọ elu ma enweghị njikọ. Ozugbo ịchọre ihe ọ bụla na ngwa Google, ị ga -ahụ afụ nwere egwuregwu vidiyo. Egwuregwu dị ịtụnanya mana ọ bara uru ịnwale maka ihe omimi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Google Chrome » Egwuregwu Google niile, gụnyere akụkọ ifo dinosaur